Khasaaraha warshadaha diyaaraduhu wuxuu gaarayaa $ 200 bilyan sanadka 2020-2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Khasaaraha warshadaha diyaaraduhu wuxuu gaarayaa $ 200 bilyan sanadka 2020-2022
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dadku ma lumin rabitaankoodii ahaa inay safraan sidaan ku aragno adkeysiga suuqa gudaha ee adag. Laakiin waxaa laga celinayaa safarka caalamiga ah xannibaadyo, hubin la'aan iyo kakan.
Khasaaraha warshadaha saafiga ah ayaa la filayaa inuu hoos ugu dhaco $ 11.6 bilyan sannadka 2022 kadib $ 51.8 bilyan oo khasaare ah 2021 (wuxuu ka sii dartay $ 47.7 bilyan oo lagu qiyaasay bishii Abriil).
Baahida (oo lagu cabiray RPKs) ayaa la filayaa inay istaagto 40% heerarka 2019 ee 2021, oo kor u kacda 61% marka la gaaro 2022.
Tirada guud ee rakaabka diyaaradda ayaa la filayaa inay gaadho 2.3 bilyan sannadka 2021 -ka.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) waxay ku dhawaaqday aragtideedii ugu dambeysay ee waxqabadka maaliyadeed ee warshadaha diyaaradda oo muujineysa natiijooyin hagaagsan iyadoo ay sii socoto xiisadda COVID-19:
Khasaaraha warshadaha saafiga ah ayaa la filayaa inuu hoos ugu dhaco $ 11.6 bilyan sannadka 2022 kadib $ 51.8 bilyan oo khasaare ah 2021 (wuxuu ka sii dartay $ 47.7 bilyan oo lagu qiyaasay bishii Abriil). Qiyaasta khasaaraha 2020 ee saafiga ah ayaa dib loo eegay ilaa $ 137.7 bilyan (laga bilaabo $ 126.4 bilyan). Ku darista kuwan, wadarta khasaaraha warshadaha ee 2020-2022 ayaa la filayaa inay gaarto $ 201 bilyan.
Tirada guud ee rakaabka ayaa la filayaa inay gaadho 2.3 bilyan sannadka 2021. Tani waxay u kici doontaa 3.4 bilyan sannadka 2022 taas oo la mid ah heerarka 2014 oo aad uga hooseysa 4.5 bilyan oo socotada ah 2019.
Baahida adag ee xamuulka hawada ayaa la filayaa inay sii socoto dalabka 2021 oo ah 7.9% oo ka sarreeya heerarka 2019, oo kordhaya 13.2% ka sarreeya heerarka 2019 ee 2022.
“Baaxadda dhibaatada COVID-19 ee shirkadaha diyaaradaha ayaa aad u weyn. Muddada 2020-2022 guud ahaan khasaaraha ayaa gaari kara $ 200 bilyan. Si ay u noolaadaan shirkadaha diyaaradaha ayaa si aad ah u jaray kharashaadkii waxayna la qabsadeen meheradooda wixii fursado ah ee la heli karay. Taasi waxay arki doontaa luminta $ 137.7 bilyan ee 2020 oo la dhimayo $ 52 bilyan sanadkan. Taasina waxay sii yareyn doontaa $ 12 bilyan sannadka 2022. Waxaan si fiican uga gudubnay meesha ugu qoto dheer ee dhibaatada. In kasta oo ay jiraan arrimo culus, haddana waddada soo -kabashada ayaa soo muuqata. Duulista ayaa mar kale muujineysa adkeysigeeda, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha IATA General.
Ganacsiga xamuulka hawadu si fiican buu u socdaa, safarka gudahana wuxuu ku dhow yahay heerarka ka horreeya dhibaatooyinka 2022. Caqabadda ayaa ah suuqyada caalamiga ah oo weli aad u niyad-jabsan maadaama xayiraadaha ay dawladdu soo rogtay ay sii socdaan.
“Dadku ma lumin rabitaankoodii ahaa inay safraan sida aan ku aragno adkeysiga suuqa gudaha ee adag. Laakiin waxaa laga celinayaa safarka caalamiga ah xannibaadyo, hubin la'aan iyo kakan. Dawlado badan ayaa u arka tallaalada sidii looga bixi lahaa dhibaatadan. Waxaan si buuxda isugu raacsanahay in dadka la tallaaley aysan sinaba u xaddidnayn xorriyaddooda dhaqdhaqaaqa. Dhab ahaantii, xorriyadda safarka ayaa dhiirigelin wanaagsan u ah dad badan oo la tallaalo. Dawladuhu waa inay wada shaqeeyaan oo ay sameeyaan wax kasta oo karaankooda ah si loo hubiyo in tallaallada ay heli karaan qof kasta oo iyaga doonaya, ”ayuu yidhi Walsh.
Abaalmarinnada K-Pop ee Indonesia ee ugu horreysay Hadda si toos ah u socota
4 ka mid ah 5ta goobood ee xeebaha ugu fiican aduunka waxay ku yaalaan US
Kala bar dadka degan UK waxay qorsheeyaan safarro dhowr ah sanadka soo socda
Imaaraatka ayaa dib u cusbooneysiiyay ballan qaadkeedii Seychelles ee Expo...
Tallaalka Ruushka ee Sputnik V hadda loo oggolaaday gelitaanka Israel
Taariikhaha cusub ee ITB Berlin: Maarso 9-13 toos iyo qof ahaan
Wadamo badan ayaa joojiyay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee...